नबिल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय...
पोखरा फाइनान्सको नाफा ७४.०५ प्रतिशतले बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा कति ?
पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार फाइनान्सको खुद नाफामा बृद्धि भएको छ । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, १० : ४८
प्रभू बैंकको नाफामा उछाल, ईपीएस पनि बढ्यो
प्रभू बैंक लिमीटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
शनिबार, ३० साउन २०७८, १० : २३
एनआईसी एशिया बैंकको नाफा ४.९२ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक कस्ता छन् ?
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। ...
शनिबार, ३० साउन २०७८, ०८ : ४९
नेपाल टेलिकमको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि गिरावट
नेपाल टेलिकम लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। ...
शनिबार, ३० साउन २०७८, ०७ : ३६
१५.६१ प्रतिशतले बढ्याे अरुण भ्यालीको नाफा, ईपीएस कति ?
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चाैथाे त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, १२ : ३४